Booqashada Goobta Aqoonyahanka Minnetonka - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
15-kii sano ee la soo dhaafay, kumanaan barayaal ah ayaa booqday Minnetonka, oo ay ku jiraan Ururka Guddiyada Dugsiyada Qaranka, oo martigaliyay booqashadoodii labaad ee Minnetonka sanadkii 2014. Kaalay arag barashada ficil ahaan, goobjoog u noqo barnaamijyada la xaqiijiyay iyo soo uruurinta fikradaha cusub ee aad ku soo celin karto dugsiga!
Waxaad dooran kartaa inaad booqashadaada ka bilowdo dugsiga hoose, dugsiga dhexe ama dugsigeenna sare. Safaradaada ka dib iskuulka, waxaad u gudbi doontaa Xarunta Adeega Degmooyinka ee qadada iyo kal-fadhiyada aad jeceshahay. Ka dooro kal-fadhiyo kala duwan oo ay hogaaminayaan shaqaalaha Minnetonka si aad u barato sida ay wax uga socdaan daaha gadaashiisa. Kalfadhiyada waxaa ka mid noqon kara hal-abuurnimo, Qaab-dhismeedka Waxbaridda ee Baridda iyo Barashada, barashada qadka, codeynta, Naqshadeynta Barashada, qiimeynta, hannaanka dib u eegista manhajka, barnaamijyada hibada iyo hibada leh, adeegyada taageerada ardayda, barashada shaqsiyeed, 1: 1 Ipad iyo in ka badan. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fadhiyada suurtagalka ah ee laga dooran karo ayaa laga heli karaa halkan. Soo hel hababka ugu fiican ee lagu hirgalinayo tilmaam macno leh oo dardar galin doonta barashada, haysato wakhti aad su'aalo ku weydiiso kuna laabato iskuulkaaga oo ay ka buuxaan fikrado!
Helitaanku wuu xadidan yahay si shakhsi looga dhigo ajandaha maalinta. Qado ayaa la bixiyaa. Halkan iska qor maanta!
Ku saabsan Minnetonka
Dugsiga Degmada Minnetonka, waxaan diirada saareynaa heer caalami, heer sare oo ku saleysan canugga carruurnimada hore, dugsiga hoose iyo sare. Waxaan caan ku nahay adkeynta tacliinta, heer sare fanka iyo ciyaaraha fudud, iyo xulashada iyo dabacsanaanta ardayda iyo qoysaska. Dugsiyadeena heer sare waxay bixiyaan barnaamijyo gaar ah oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha waxbarasho iyo danaha canug walba. Barnaamijyada khaaska ah waxaa ka mid ah Navigators iyo barnaamijyo karti sare leh , VANTAGE , Minnetonka Research , Shiinaha iyo Isbaanishka , Tonka Online , Tonka Coders iyo Makers , ciyaaraha fudud iyo farshaxanka. Dhammaan ardayda dhigata fasallada 5-12 waxay qayb ka yihiin Barnaamijka iPad 1: 1 . Ku guuleysiga ardaygu waa mid heer sare ah marwalbana wuxuu ka mid yahay kuwa ugu fiican qaranka.
Qaab-dhismeedka Waxbariddeena Barashada iyo Barashada ayaa ardayda dhigeysa bartamaha manhajkeena. Marka laga gudbo akhriska, qorista iyo xisaabta, waxaan kobcineynaa iskaashi, xiriir, feker xasaasi ah, hal-abuur, barasho caalami ah, habsami u socodka tikniyoolajiyadda iyo waayaha dunida dhabta ah. Macallimiinteennu waa udub dhexaad u dhaqankeenna hal-abuurnimada. Waxay u qaabilaan teknolojiyadda sidii dardar-gelin wax-barasho, laga bilaabo manhaj sireed ilaa aalado casri ah oo ka dhigaya ilaha fasalka mid ku habboon oo casriyeysan. Waxay si fiican u yaqaanaan fikirka naqshadeynta iyo mashruuc ku saleysan, waxbarasho shaqsiyeed oo udiyaarineysa canug walba mustaqbal kaliya la maleysan karo.
Booqashada Goobta Soosocota
Waxaad buuxin kartaa foomkan si lagugu ogeysiiyo fursadaha booqashada mustaqbalka.
Isuduwaha Booqashada Goobta